Baadhitaan lagu samaynayo diiwaanka dumarka jidhdilka loo geysto - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Booliiska oo diiwaan u sameeyay dumarka jidhdilka loo geysto
Baadhitaan lagu samaynayo diiwaanka dumarka jidhdilka loo geysto
Booliska oo diiwaangelin u sameeyay dumarka xadgudubyada loo geysto
La daabacay onsdag 17 december 2014 kl 16.03
Booliiska oo dhaleecayn badan loo soo jeediyay kadib markii booliisku sameeyay diiwaan gelin u gaar dumarka jidhdilka loo geysto. Diiwaangelintan oo ah mid aan sharciga waafaqsanayn ayaa ay dood badani ka dhalatay, waxaana hadda arrintaa baadhitaan ku wada haayadda baadhitaanka xogaha ( Datainspektionen)
- Waxa ii muuqda saddex dhibaato oo uu leeyahay diiwaankani. Ta koowaad waxa weeye in aanu diiwaankani haysan ogolaansho sharci sannadadii u danbeeyay, ta labaad waa in aan diiwaangelintan loo bahayn hannaan sharciga waafaqsan iyo ta saddexaad oo ah in ay diiwaankan ku jiraan xogo badan oo xaasaasi ah kuwaasi oo ku saabsan ashkhaas gaarna, waxayna iswaydiintu tahay faa’iidada ay soo kordhin karto in xogo noocaas oo kale ah la kaydiyo. Waa in aynu dhibaatadan hoos u eegno.
Kaasi waxa uu ahaa Mats Löfving oo ah taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Stockholm.
Booliiska magaalada Stockholm ayaa dhaleecayn badan loo soo jeediyay kadib markii ay booliisku sameeyeen diiwaangelin sharciga baal marsan. Taasi oo ay ku kaydiyeen xog badan oo ku saabsan dumar jidhdil loo geystay. Diiwaangelintan oo ah mid ka kooban xogo xaasaasi ah ayaa waxa markii ugu horraysay ka hadlay taliyaha booliiska gobolka Stockholm Mats Löfving. Mats waxa uu sheegay in diiwaangelintan laga lahaa ujeeddo wanaagsan, taasi oo ahayd in lagu caawiyo dumarka ay dhibaatooyinku soo gaadhaan. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in laga yaabo in ay wax qaldameen, taasina ay u baahan tahay in samir loo yeesho ilaa inta haayadaha ku shaqada lihi baadhitaan fiican ku samaynaysaan.
Mar la waydiiyay su’aal ahayd sababta uu booliisku u diiwaangeliyay xogta dumarka dhibta loo geystay , halka aanay wax badan ka qorin qofkii danbiga gaystay waxa uu sheegay in diiwaangelintani ahayd sidii loo sugi lahaa ammaanka qofka dumarka ah ee dhiban iyo sidii loo caawin lahaaba. Dhanka kale Mats Löfving waxa uu sheegay in ay waajib tahay in ay ilaaliyaan sharafta iyo kalsoonida lagu qabo booliiska, isaga oo sheegay in haayadda booliisku ka mid tahay haayadaha loogu kalsoonida badan yahay, iyada oo taasi ku kasbatay sida ay u ilaaliso xogaha dadka ay diiwaankooda hayso.
Dhinaca kale xogaha ay heshay idaacadda wararka ee Ekot, ayaa muujinaya in nin ka tirsanaa ciidamada ammaanka, ka hor intii aan shaqada la eryin sannadkii 2004 uu ka hawlgali jiray xarunta booliiska ee Södertorn uu qudha ka jaray xaaskiisii. Haweenaydan uu ninku dilay ayaa intii aanay dhiman booliiska u sheegtay in khatar ku jirto oo uu ninkeedu jidhdil u geystay, laakiinse booliiska ayaa arrinteeda ku qiimeeyay mid aan khatarteedu weynayn. Mar arrintan wax laga waydiyay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Stockholm Mats Löfving ayuu uu sheegay in aanu waxba kala socon dhacdadaas.
Elisabeth Wamken oo ah lataliyaha ururrada haweenka ayaa aaminsan in diiwaangelintani saamayn weyn ku yeelan doonto haweenka, taasi oo keeni doonta in dad badani aanay ku dhiirran in ay booliiska u sheegaan dhibta loo geystay.
-Waa hubaal in diiwaangelintani dumar badan saamayn doonto. Waxa aynu ognahay in ay jiraan dumar badan oo jidhdil loo geysto, kuwaasi oo aan ku dhiirrin in ay booliiska u sheegaan dhibka soo gaadhay, iyaga oo ka baqaya in xogtoodu faafto. Sidaasi daraadeed haddii ay dadku ogaadaan habkan uu booliisku u diiwaan geliyay xogtii dadka, waxa hubaal ah in aanay dumar badani ku dhiirran doonin in ay booliiska u sheegaan dhibka loo geystay
Dhanka kale Debbie Nujen waa qareen inta badan la shaqaysa carruurta iyo haweenka danbiyada jidhdilka ah loo geysto, waxaanay ka hawlgashaa ururka Terrafem, ururkaasi oo ka shaqeeya waddanka oo dhan, isaga oo caawiya dumarka iyo carruurta jidhdilka ama handadaada loo geysto. Debbie waxa ay si weyn uga soo horjeeddaa diiwaankan uu booliisku sameeyay.
- Waa sharcidarro, waxaanan arrintan u arkaa mid qaldan. Wali maan fahmin ujeeddada laga leeyahay diiwaankan. Maxaa dumarka loo diiwaangeliyay? Waa nasiibdarro in hab noocan oo kale ah uu booliisku u diiwaangeliyo dadka danbiyada laga galay. Taasi waxa ay ahayd Debbie Nujen oo ah qareen, lana shaqaysa ururka Terrafem.
Booliiska magaalada Stockolm ayaa dhawr iyo tobankii sanno ee u danbeeyay diiwaangaliyay kumanaan dumar ah oo jidhdil iyo handadaado loo geystay. Sida ay maanta idaacadda Ekot daaha ka fayday, diiwaangelintan ayaa ah mid ay ku kaydsan yihiin waxyaabo badan oo xaasaasi ahi.
Warbixintan ay maalintii salaasadii soo bandhigtay idaacadda Ekot ayaa muujinaysa in tiro u dhaxaysa 2000 ilaa 3000 oo dumar ahi u diiwaan gashan yihiin booliiska degmada Södertörn ee magaalada Stockholm. Dumarkaasi oo la sheegay in ay jidhdil iyo handadaad kala kulmeen dadka ugu dhaw nolosha.
Ingrid Helmius oo ah khabiir ku takhasustay sharciga guud, kana tirsan jaamacadda Uppsala oo cilmi-baadhis ku samaysay shaqada booliiska ayaa sheegtay in tallaabadani tahay miq sharciga baal marsan. Ingrid waxa ay si cad u sheegtay in diiwaangelintan uu booliisku sameeyay tahay mid qayrul-sharci ah.
Nidaamkan cusub ayaa ah mid ka garab shaqaynaya nidaamkii caadiga ah ee booliisku ku shaqeeyo. Sida uu sheegay taliyaha booliiska gobolka Stockholm Mats Löfving waxa diiwaankan la bilaabay badhtamihii sannadkii 2000. Sida caadiga ah diiwaankani waxa uu ku kaydsan yahay faylal ku qoran barnaamijka Excel. Baadhitaankii la sameeyayna waxa lagu ogaaday in dacwadaha qaar ay ku jiraan warbixino xaasaasi ahi. Tusaale ahaan dumarka qaarkood waxa ku qoran dhalasho ahaan halka ay ka soo jeedaan, diinta ay haystaan iyo waliba xogta caafimaadka oo sheegaysa haddiiba uu qofku xanuunsanayo. Tusaale ahaan waxa dumarka qaar ugu qoran, ´´ waxa ay ka timid waddanka Eletariya, waana qof diinta aad ugu ad adag´´. Ama in ay sunni Muslin na tahay ama ay shiica tahay.
Dumar badan oo ah kuwan u diiwaangashan booliiska ayaa ay booliisku siyaabo kala duwan kiiskooda qoreen, tusaale ahaan iyaga oo sheegay in ay u malaynayaan in dumarka qaar ayna maskaxda ka fayoobayn.
Haayadda baadhitaanka xogaha ee loo yaqaano Datainspektion, ayaa bilowday baadhitaan ay ku waddo arrinta. Waxaana la dhawrayaa natiijada ka soo bixi doonta baadhitaankaas.
Taliyaha booliiska oo ka hadlay diiwaankii uu booliisku sameeyay
Qiimeeyn aan dhab ahayn oo ey sameeyeen ciidanka ammaanku